Fil d'actualités du 13/12/2018
Archive du 20131227
Feno ny kapoaka ! Tsy zakan�ny vahoaka intsony ny familiviliana ny safidiny. Nidina an-dalambe niaraka tamin�ireo kandida solombavam-bahoaka lasibatra amin�izao hala-bato izao ny vahaoka tao Morondava omaly.
Hanao angaredona hiady amin�ny hala-bato
Tapa-kevitra tanteraka. Tsy misy ny andraso andraso ho an�ny ankolafy Ravalomanana fa taorian�ny kabary tamin�ny talata lasa teo teny amin�ny Magro dia miroso amin�ny asa avy hatrany.
Fitorian�i Dr Robinson
Efa eny amin�ny CENI-T sy CES
Pr Limby sy ireo kandid� naodina ny vatony
Tsy manaiky hala-bato nampandaniana kandid�m-panjakana
Hangotraka ny tolom-pitakiana amin�ity herinandro ity ary ahiana ny hivadihan�izany ho zavatra hafa tanteraka, raha ny zava-misy amin�izao no zohina, raha tsy misy ny fandraisan�andraikitry ny CENI-T sy ny CES.
Tsy misy vahoaka faly amin�ny hitohizan�ny tetezamita indray
Manohitra marindrano ny vokam-pifidianana depiote ireo kandida 22 amin�ny 24
Manohitra marin-drano ny voakam-pifidianana ho solombavahoaka natao ny 20desambra teo ireo kandida 22 mianadahy amin�ireo 24 nirotsaka hofidina tao amin�n Distrikan�i Tolagnaro.
Nitrangana hala-bato tamin�ny fifidianana solombavam-bahoaka
Saika manerana ny Nosy mihitsy ankehitriny no ahenoana fitarainana noho ny resaka hala-bato sy fikasana hanao hosoka tamin�ny valim-pifidianana farany teo.
Ankon�ny fetin�ny Krismasy
Betsaka ny lozam-pifamoivoizana, gaboraraka ny fivarotan-toaka
Tsy nahasarika olona tahaka ny isan-taona ny fiatrehana ny misasak�alin�ny Noely noho ny resaka tsy filaminana ao Toamasina, na niezaka naka mpiambina manokana avokoa aza ny ankamaroan�ireo fiangonana mba hiambina ireo fananan�ny mpino.
Nanamafy ny fisian�ny hala-bato tamin�ny fifidianana solombavam-bahoaka tao Antsirabe I ny kandidan�ny ankolafy Ravalomanana Michel Ambalavato ary nampiseho ireo porofo tany aminy tamin�ny mpanao gazety teto Iarivo omaly mialohan�ny hanaterany ny fitoriany eny anivon�ny CES sy ny CENI-T.
Birao fandatsaham-bato 32 amin�ny 207 nisy olana ny PV
Fanahiniana sa tsy fahaizana mifehy ny fifidianana no nahatonga ny taratasim-pifidianana (PV) tamin�ny birao fandatsaham-bato miisa 32 ho tsy tomombana tany amin�ny Distrika Ambatondrazaka? Miseho amin�ny endrika samihafa izany.
Radio Aqua-FM Toamasina
Nisy namaky, very avokoa ny fitaovana
Krizy Vaovao ?